ခန်ဓာကိုယျမှာ အလုပျအမြားဆုံး အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ အသညျး ကို ပွနျလညျသနျ့စငျခွငျး – Nyi Ma Lay
ခန်ဓာကိုယျမှာ အလုပျအမြားဆုံး အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ အသညျး ကို ပွနျလညျသနျ့စငျခွငျး
အသညျး ကတော့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အသညျးဟာအရေွး ကီးတဲ့အင်ျဂါတ ဈခုဖွဈသလိုအလုပျအ မြားဆုံးသော ကလီစာလညျးဖွဈပါ တယျ။စား အမြှအစာတှကေအ ဆိပျတှေ ကိုဖွပေေးရပါတ ယျ။နစေ့ ဉျစားနတေဲ့အစာတှေ ထဲမှာအ ဆိပျတှကေအမြား ကွီးပဲ။ ဒါကွောငျ့အ သညျးကောငျးဖို့သိ ပျအရေးကွီးပါတယျ။
အသညျးကိုဆေး ဖို့အကောငျးဆုံးကတော့မနျကြ ညျးဖြျောရညျဖွဈ ပါတယျ။မနျ ကညျြးသီးဟာအသညျးအ တှကျသဘာဝ ကပေးထားတဲ့ဆေးလညျးဖွ ဈပါတယျ။အ သညျးကိုနုပြိုစပေါတယျ။ အသညျးခွောကျခွငျး၊ကြုံ့ခွငျး၊ကွှပျခွ ငျး၊ဆတျခွငျး၊ပုပျခွငျးတှေ မဖွဈအောငျကာ ကှယျေ ပးပါတယျ။
အခုခတျေမှာ Bပိုး Cပိုး Hပိုးစသညျွ ဖငျ့ဖွဈကွတာ ဟာအသညျးပုပျ လို့ပါ။ပိုးဆို တာပုပျမှတှယျတာပါ ။ မပုပျရငျမ တှယျပါဘူး။ အဲ့လိုပိုး မတှယျအောငျ အသညျးကိုဆေးေ ကွာပေးဖို့လိုပါ တယျ။ရိုးရိုးလေးပါပဲ၊မနျကြ ညျးဖြျော ရညျသောကျေ ပးရုံပဲဖွဈပါတယျ။
မနျကညျြးမှညျ့လ ကျတဈဆုပျ၊ထနျးလြှကျ သငျ့ရုံ၊ဆား အနညျး ငယျကိုမတျခှ ကျထဲမှာထညျ့ပွီးေ ရနှေးဆူကိုေ လာငျးထညျ့ပါ။မန ကျထဲကနှ ပျထားရငျညနဆေိုေ သာကျလို့ရ ပါပွီ။ ဆနျကာနဲ့စဈလို ကျရငျအရသာရှိတဲ့မနျ ကညျြးဖြျောရ ညျကိုရပွီပေါ့။သံပရာသီွး ကိုကျရငျညှဈထ ညျ့၊အေးအေးလေးသော ကျခငျြရငျရခေဲထညျ့ေ သာကျပါ။
အသညျးက အဆိပျအပုပျတှသောမက ဝမျးဗိုကျထဲက အပူအပုပျတှလေညျးထှကျ သှားပွီးလူကေ ပါ့ပါးလနျးဆ နျးသှားပါလိမျ့မ ယျ။အဆိ ပျအပုပျအပူအစပျတှေ ကငျးရှငျး သှားတော့သှေးသားသ နျ့စငျပွီး အလှေ တှလညျးတိုးပွီပေါ့။ Credit….. Original
အသည်း ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသည်းဟာအရေြး ကီးတဲ့အင်္ဂါတ စ်ခုဖြစ်သလိုအလုပ်အ များဆုံးသော ကလီစာလည်းဖြစ်ပါ တယ်။စား အမျှအစာတွေကအ ဆိပ်တွေ ကိုဖြေပေးရပါတ ယ်။နေ့စ ဉ်စားနေတဲ့အစာတွေ ထဲမှာအ ဆိပ်တွေကအများ ကြီးပဲ။ ဒါကြောင့်အ သည်းကောင်းဖို့သိ ပ်အရေးကြီးပါတယ်။
အသည်းကိုဆေး ဖို့အကောင်းဆုံးကတော့မန်ကျ ည်းဖျော်ရည်ဖြစ် ပါတယ်။မန် ကျည်းသီးဟာအသည်းအ တွက်သဘာဝ ကပေးထားတဲ့ဆေးလည်းဖြ စ်ပါတယ်။အ သည်းကိုနုပျိုစေပါတယ်။ အသည်းခြောက်ခြင်း၊ကျုံ့ ခြင်း၊ကြွပ်ခြ င်း၊ဆတ်ခြင်း၊ပုပ်ခြင်းတွေ မဖြစ်အောင်ကာ ကွယ်ေ ပးပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ Bပိုး Cပိုး Hပိုးစသည်ြ ဖင့်ဖြစ်ကြတာ ဟာအသည်းပုပ် လို့ပါ။ပိုးဆို တာပုပ်မှတွယ်တာပါ ။ မပုပ်ရင်မ တွယ်ပါဘူး။ အဲ့လိုပိုး မတွယ်အောင် အသည်းကိုဆေးေ ကြာပေးဖို့လိုပါ တယ်။ရိုးရိုးလေးပါပဲ၊မန်ကျ ည်းဖျော် ရည်သောက်ေ ပးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
မန်ကျည်းမှည့်လ က်တစ်ဆုပ်၊ထန်းလျှက် သင့်ရုံ၊ဆား အနည်း ငယ်ကိုမတ်ခွ က်ထဲမှာထည့်ပြီးေ ရနွေးဆူကိုေ လာင်းထည့်ပါ။မန က်ထဲကနှ ပ်ထားရင်ညနေဆိုေ သာက်လို့ရ ပါပြီ။ ဆန်ကာနဲ့စစ်လို က်ရင်အရသာရှိတဲ့မန် ကျည်းဖျော်ရ ည်ကိုရပြီပေါ့။သံပရာသီြး ကိုက်ရင်ညှစ်ထ ည့်၊အေးအေးလေးသော က်ချင်ရင်ရေခဲထည့်ေ သာက်ပါ။
အသည်းက အဆိပ်အပုပ်တွေသာမက ဝမ်းဗိုက်ထဲက အပူအပုပ်တွေလည်းထွက် သွားပြီးလူကေ ပါ့ပါးလန်းဆ န်းသွားပါလိမ့်မ ယ်။အဆိ ပ်အပုပ်အပူအစပ်တွေ ကင်းရှင်း သွားတော့သွေးသားသ န့်စင်ပြီး အလှေ တွလည်းတိုးပြီပေါ့။ Credit….. Original
Previous post ဒီအခြိနျ …..ကား ဝယျသငျ့လား ? လူတိုငျး သိခငျြနမေယျ ထငျပါတယျနျော……..
Next post သံခြောငျး အတုအစဈ ဘယျလို ခှဲကွမလဲ…..